Njengoba eyaziwayo jikelele smart amandla izixazululo umhlinzeki nelanga module umakhi, Prostar lunikezelwe ukwabelana ibhizinisi layo nabasebenzi nokwabelana impumelelo nabalingani. Ngezinye Prostar Solar, amagugu ethu elawula ubudlelwano bethu namakhasimende ethu kanye nomunye. Zenza bonke abasebenzi bethu emhlabeni jikelele, kuzo zonke hlobo luni lomsebenzi, ukuqonda ukuthi singobani njengoba inkampani, nalokho esikumele, futhi okubaluleke kakhulu, kanjani mayelana nomsebenzi owenziwayo. Amagugu ethu zilotshiwe ukuba ugqozi futhi Umhlahlandlela, ngoba lokhu sikwenza kanjani ekufezeni impumelelo okubaluleke kakhulu ngendlela esikufinyelelayo. Sikhuthaza kokubili abasebenzi bethu nozakwethu yokucebisa inhlalakahle yomphakathi kanye nomnotho ngokunikela ekuthuthukiseni amandla ethengekayo ahlanzekile.
Beka Amakhasimende Okokuqala
• Sabeka ikhasimende esikhungweni zonke izinqumo esizenzayo
• Sakha izixazululo elula nenhle futhi ekuhlanganyeleni
• Silindele izinselele futhi ukuzixazulula komzamo
• Thina sebenzisana yonkana imisebenzi, ngoba besebenza ndawonye sibathelela izixazululo kangcono
• Sakha ukubambisana enamandla ngaphakathi nangaphandle
• Sigxila okubaluleke ngokuqonda wabelane yamasu Prostar Solar futhi imigomo
• Thina amandla smart ekuthathweni futhi sisekele izinqumo esizenzayo
• Sikhuthaza ukuphila engozini ngezinga eleqile, nifunde kokubili impumelelo noma singaphumeleli
• Sakha ithemba, ukuthembela futhi izinqumo kuwo wonke amazinga
• Singabantu olukhuni mayelana nokuthola indlela engcono futhi sithuthukisa nsuku zonke
• Sazibekela umkhakha ejwayelekile futhi njalo ukukhulisa bar
• Sizimisele ukufunda ngokushesha futhi senza umbiko owakhayo futhi mpikiswano ukuthola izixazululo ezingcono
Ingabe Right Thing
• Sihlala ukuhlangabezana izibopho zethu kumakhasimende ethu, abanikazi bamasheya zethu kanye nomunye
• Thina abasekela ezindinganisweni eziphakeme zokuziphatha, ukuphepha, izinga kanye nokusimama
• Thina azibophezele ekuthuthukiseni iplanethi kanye nemiphakathi esisebenza
Yiba Kuyazuzisa e Indlela Esimeme
Siphila ibhizinisi lethu empumelelweni futhi alethe ukubuyiselwa kubanikazi bamasheya ngokulandela ngenkuthalo umbono wenkampani, nokugcina win / uwine ubuhlobo zasemsebenzini, futhi okwenza Inani amakhasimende.
Abelana Impumelelo nge Abasebenzi
Sikholelwa ngokuqinile ukuthi ukuze siphumelele njengamaKristu ibhizinisi eduze incike ithalente, amakhono, kanye nobuchwepheshe zabantu bakithi kanye nokukwazi ukusebenza njengoba iqembu uvalwe kuhlanganiswe. Sihlonipha umsebenzi zabantu, siyivikela izinzuzo zabasebenzi bethu, sikukhuthaza abasebenzi ukuba uzovulelwa izinselele nokudalwa futhi sibanikeze nosizo abaludingayo eqinile ukubasiza liqalise imibono eyakhayo. Kusukela kokubili inhlalakahle kanye indlela umsebenzi, Prostar Solar abelana ukukhula nempumelelo ibhizinisi namathimba yayo umphakathi womhlaba.